गोविन्द केसी हत्यारा हुन् : नेकपा नेता अधिकारी - info4nepal
गोविन्द केसी हत्यारा हुन् : नेकपा नेता अधिकारी
तल यी सब भनिएका कुरा पैसावाला र माफियाहरुको आफ्नो फाइदाको लागि भनिएको कुरा हो । डाक्टर केसिको अनशन देश र जनताको फाइदाको लागि हो । जनहितको लागि हो।
काठमाडौं, असार २७ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेशसभा सदस्य एवम् प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजका संस्थापक सदस्य डा. रामकुमार अधिकारीले पत्रकाहरुले डा. गोविन्द केसीलाई देवत्वकरण गरेको आरोप लगाएका छन् ।
तर यी सब भनिएका कुरा पैसावाला र माफियाहरुको आफ्नो फाइदाको लागि भनिएको कुरा हो । डाक्टर केसिको अनशन देश र जनताको फाइदाको लागि हो । जनहितको लागि हो।
लेनिन बिष्टसंग किन डरायो ओली सरकार ? अधिनायकवादको संकेत- मानव अधिकार आयोग (भिडियो)